Rahonan’ny Polisy Amin’ny Alàlan’ny Twitter Hoe Hosamborina ireo Maldiviana Bilaogera Any Ivelany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2017 8:18 GMT
Mpitoraka blaogy sady mpikatroka Muju Naeem. Sary nahazoana alalana
Efatra ireo Maldiviana bilaogera sady mpikatroka miasa tena izay mipetraka any ampitan-dranomasina no namoahana didy fisamborana avy amin'ny polisy tamin'ny herinandro lasa teo. Efa nampitahotra ihany koa ny polisy hoe hanohy ny fanenjehana na tsy hiseho fitsarana aza raha toa ka tsy tafaverina any Maldiva ao anatin'ny tapa-bolana ireo blaogera.
Namoaka didy fisamborana ho an'i Muzaffar ‘Muju’ Naeem, Hani Amir, Dr. Azra Naseem, sy Aishath Velezinee tamin'ny alalan'ny gazety sy bitsika ho an'ny daholobe ny polisy. Ity no fisamborana nalefa ho an'ny blaogera Muju Naeem, mpanohana ny demokrasia sady blaogera mahaleotena avy any Maldiva izay nanira-tena hiaina an-tsesitany efa ho dimy taona izay:
Filazana an-Gazety: PMC/2017/15https://t.co/vo3oXbUGGv pic.twitter.com/F49ATe9IO6
Nandika ilay didy fisamborana tao amin'ny blaoginy i Muju Naeem:
Ilaina amina fanadihadiana ataon'ny Sampandraharan'ny Polisy ao Maldiva i Muzaffar Mohamed Naeem (37 taona) avy any M. Velidhooge, K. Male.
Koa satria naheno vaovao izahay fa mipetraka any ivelany i Muzaffar Mohamed Naeem amin'izao fotoana izao, dia antsoina hiseho ao amin'ny Sampandraharahan'ny Polisy ao Maldiva izy ao anatin'ny 14 andro ho valin'ny fiampangana azy ao anatin'ny fanadihadiana ataonay.
Raha tsy miseho ao amin'ny Sampandraharahan'ny Polisy ao Maldiva i Muzaffar Mohamed Naeem ao anatin'ireo 14 andro ireo, handefa porofo manameloka azy ao anatin'ny fanadihadiana ataonay izahay ho any amin'ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Maldiva mba hanohy ny fanenjehana na tsy manatrika aza izy. Navoaka mba hampahafantatra an'i Muzaffar Mubeen Naeem mikasika izany ity fanamarihana ity.
Tsy nanome fanazavana fanampiny mikasika ny toetoetran'ilay fanadihadian'ny polisy na izay porofo ananany manenjika an'i Naeem ilay tahirinkevitra. Manoratra i Naeem:
Ireo didy fisamborana ireo dia naterak'ilay antso nataon'ilay lehiben'ny parlemantera avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondràna amin'izao fotoana izao, Ahmed Nihan, mba hisamborana sy hanenjehana ireo olona ”tsy mpino” rehetra ao amin'ny firenena amin'izay faritra sy fepetra rehetra feran'ny lalàna.
Araka Ny Maldivian Independent, taminà fivoriana iray vao haingana nataon'ny fitondràna iraha-mitantana, nilaza i Ahmed Nihan, lehiben'ireo parlemanteran'ny Antoko Liam-pivoarana fa ireo Maldiviana izay manompa ny Silamo dia tokony henjehana sy saziana araka izay fepetra rehetra feran'ny lalàna. Efa nisy ohatrana mpino maro mpanao an-tendrony nanisy marika ”tsy ara-pinoana/ivelan'ny fivavahana” ny tranon'ny olona kendreny tany Maldiva.
Efa nahazo fandrahonana sy fanaovana antsojay maharitra tamin'ny aterineto avy amin'ireo mahery fihetsika i Naeem noho ny fijeriny tsy ara-pivavahana sy ireo tsikera politika tamin'ireo andianà lahatsary mitohy amin'ny aterineto nataony niaraka tamin'ilay mpitoraka bilaogy maty nisy namono, Yameen Rasheed (jereo ny tatitra Global Voices).
Taorian'ny nahafatesan'i Yameen, nanoratra taratasy namaivay ho an'ny Filoha sy ny governemanta ao Maldiva i Naeem nitsikerana ny tsy fihetsehan'ny governemanta mialohan'ny fiitaran'ilay olana mikasika ny fanaovana mahery fihetsika ao Maldiva. Efa niseho tao anatina podcast niaraka tamin ”Ireo Jihadista Ivelan'ny Fivavahana avy any Afovoany Atsinanana”, vondrona iray mampiantrano tsy mpino sy ireo Silamo taloha ahitana an'i Yasmine Mohammah, Ali Rizvi, Faisal Saeed, Al Mutar ary i Armin Navabi.
Hani Amir (@Burakashi) 27 taona no mpitoraka blaogy faharoa nahazo didy fisamborana, mpitandro ny tontolo iainana, artista ary mpakasary, izay mianatra any Aostralia amin'izao fotoana izao. Raha niresaka tamin’ny Maldives Independent, dia nilaza i Hani fa atao lasibatra ireo mpitoraka blaogy ireo satria manondrotra ny tsy fironana amin'ny fivavahana, na izy ireo tsy mpino.
Lahatsoratr'i @yaamyn mikasika an'i Maldiva, ny tsy fironana amin'ny fivavahana, ny fijoroana ho an'ireo Maldiviana Vitsy An'isa, ary ny fitolomana manohitra ny fanaovana an-tendrony ara-pivavahana https://t.co/L8yoPs5fRt
Dr. Azra Naseem no nahazo ny didy fahatelo, mpanoratra ny Dhivehi Sitee, bilaogy liam-pivoarana momba ny Fiarahamonina Maldiviana sy ny politika izay mifantoka manokana amin'ny ‘ fanaovana an-tendrony’ ara-pivavahana an'ireo vahoaka Maldiviana. Miasa toy ny mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Dublin Renivohitra ary efa nipetraka tany Dublin, Ireland nanomboka tamin'ny 1998 i Dr. Naseem. Niteny tamin'ny Maldives Independent izy ”Tena tsy mahafantatra na inona na inona mikasika ilay fiantsoana aho. Tsy nanao na inona na inona tsy ara-dalàna aho.”
Tamin'ny 23 Mey, mbola nandefa didy fisamboarana mitovy amin'izany ihany koa ny polisy ho an'i Aishath Velezinee, mpanentana tsy miankina ho an'ny fanavaozana ara-pitsarana ary mpikambana taloha tao amin'ny Vaomieran'ny Sampandraharaham-pitsarana izay mipetraka any Holandy ary mitoraka blaogy ato. Vao nakatona vao haingana ihany koa ny kaonty twitter-ny (@Velezinee). Araka ilay vavahadim-baovao Raajje.mv, vao haingana i Velezinee no nahazo laza noho ireo lahatsoratra marobe tao amin'ny Facebook, anisan'izany ireo lahatsary heverin'ny sasany ho mpaniratsira fivavahana.
Naneho hevitra mikasika ilay firehana tao amin'ny Twitter ny olona:
Didy Fisamborana an'i @Manje & @mujunaeem no notarihan'ny AKA DotGROUP @JamiyyathSalaf any #Maldiva Fehezin'izy ireo ny FilohaYAG ry zareo!#IntelTomatoSauce
Fangatahana ny rariny, firesahana manohitra ny fanaovana mahery fihetsika, & fitakiana ny zontsika dia lasa ‘hetsika tsy ara-pinoana’ any #Maldiva
Hello @PoliceMv ,when you summon people,you are required to inform them of the reason.Pls have a look at Section 105 of your “Aanmu Gavaidh” pic.twitter.com/OHL4asZ0e2
Salama @PoliceMv , rehefa miantso olona ianareo, tsy maintsy ampahafantarinareo azy ireo ny antony. Mba itopio maso kely ny Toko 105 amin'ny “Aanmu Gavaidh” nareo azafady pic.twitter.com/OHL4asZ0e2
Natao mba hampanginana ireo feo mitsikera ny governementa na heverina ho toy ny tsy “ara-pinoana”, ary ireo manao izany any amin'ny firenena any ivelany ireo didy fisamboarana ireo. Noho ny tahotra ny hiharam-panafihana na fanaovana antsojay bebe kokoa dia efa nitsahatra ny nizara lahatsoratra ireo mpikatroka mafana fo maro amin'ny aterineto ao Maldiva, raha ny sasany kosa mitady fialokalofana any ivelany.